Ungayisusa kanjani iphephadonga odongeni | Hlobisa
UMaria Jose Roldan | | Hlobisa
Iphephadonga liyithuluzi eliwusizo kakhulu lokuhlobisa ukuze ukwazi ukujabulela ukuhlobisa okuguquguqukayo futhi koqobo. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi singathola ithuba lokuthola susa iphepha lodonga yegumbi nangenxa yalokho, sizochaza ukuthi kwenziwa kanjani.
Ezikhathini ezedlule ukuhlobisa izindonga ngephepha lodonga Bekujwayelekile impela futhi namuhla le ndlela isasetshenziswa emakhaya amaningi ngenxa yazo zonke izinzuzo esinikeza zona.
1 Ungasisebenzisa kuphi isithombe sangemuva
2 Ithuluzi eliguquguqukayo
3 Shintsha noma susa isithombe sangemuva
4 Susa isithombe sangemuva ngesinyathelo
4.1 Isinyathelo ngesinyathelo ukususa iphepha lodonga
5 Susa iphepha lodonga ngaphandle kwamanzi
Ungasisebenzisa kuphi isithombe sangemuva
Ungasebenzisa iphepha lodonga nganoma yiliphi igumbi ekhaya lakho ngaphandle kwendlu yangasese nasekhishini. Endlini yokugezela ayifanele ngenxa yomswakama (ibingawohloka kalula) nasekhishini ngenxa yephunga lokudla akukhuthazwa ukubeka iphepha lodonga. Kepha esikhundleni salokho, yebo ungayisebenzisela noma iliphi igumbi olithandayo njengekamelo lakho lokulala, igumbi lokuphumula, ihholo, igumbi lokulala lezingane futhi ungasebenzisa ngisho nephepha lodonga ukuhlobisa izindonga zamaphaseji.
Ungasebenzisa ngisho nephepha lodonga ukuvuselela ifenisha endala ofuna ukuyibuyisa nokuthi ufuna ukunikeza ukuthinta kwasekuqaleni nokuhluke ngokuphelele. Ngenxa yenani elikhulu lamadizayini nokwakheka ongakuthola kokubili ezitolo zomzimba nasezitolo eziku-inthanethi, ngeke ube nenkinga yokuthola iphepha lodonga elikufanela kahle, kungaba ngezindonga noma ukuvuselela ifenisha yakho.
Into enhle ngephepha lodonga ngaphezu kokuhlukahluka kwayo ekuhlobiseni ngenxa yenani lemiklamo ehlukahlukene ongayithola emakethe (futhi engashintshwa ngokuphelele kwisitayela sakho sokuhlobisa), ukuthi uma ukhathala ngemuva kwesikhashana bekulokhu kuhlobisa igumbi ngephepha lodonga elithile, ungakushintshela okuhlukile ngaphandle komzamo omkhulu.
Lesi ngesinye sezizathu esenza abantu bakhethe iphepha lodonga ukuhlobisa amakhaya abo, ngoba uma bekhathala, kuzofanele bakhethe enye iphepha lodonga, basuse elidala bese bengeza elisha. Kuyindlela eshibhile futhi elula yokuvuselela amakamelo (noma ifenisha endala) ngezikhathi ezithile. Ungacabanga ngephepha lodonga elihlukile lesizini ngayinye uma kunesidingo!
Shintsha noma susa isithombe sangemuva
Uma sikhathele iphepha lodonga esinayo kwenye indawo yendlu, futhi sifuna shintsha noma upende udongaOkokuqala kuzofanele sikhiphe iphepha esinalo. Ngalokhu ngifuna ukukunikeza amathiphu amancane ukuze lo msebenzi ube lula futhi ungabi yinto ende futhi eyisicefe.
Icebo eliyinhloko likhona moisten iphepha ngokwanele ukuze liphume kalula odongeni ngaphandle kokuqala usimende noma ukushiya izingcezu ezincane zinamathele, ngoba lokhu singasebenzisa izindlela ezahlukahlukene:
Amanzi anensipho: Indlela elula neshibhe kakhulu ukulungiselela ibhakede lamanzi afudumele noma afudumele anensipho bese uwasebenzisa nge-roller noma ngebhulashi elikhulu ekhasini lodonga. Siyivumela ukuthi sisebenze imizuzu embalwa, noma size sibone ukuthi isiqalile ukuthamba bese siqala ukuyicwecwa ngosizo lwe-spatula.
Ithempeli: Ngokulandela inqubo efanayo nokusetshenziswa kwamanzi anensipho, kufanele sisebenzise ukufutheka odongeni lwethu olunodonga ngerola noma ibhulashi, bese silinda ukuthi lithambe ngaphambi kokuqala ukudabula iphepha.
Umhluzi we-Steam: inketho yobungcweti esinayo ukusetshenziswa kwe-steam stripper, ngumshini omncane kagesi oshisa amanzi ethangini bese uwaguqula abe umusi. Lokhu kufakwa odongeni ngohlobo lwensimbi olufakwa odongeni ukuthambisa nokukhipha ingcina. Ngesikhathi esifanayo lapho kufakwa khona umusi, iphepha kufanele lihlutshulwe nge-spatula.
Nganoma iyiphi yalezi zindlela, kufanele kucatshangwe ukuthi usimende ongaphansi kwesithombe sangemuva uzothamba, ngakho-ke ngemuva kwalokho kuzofanele uvunyelwe ukuthi uphume ukuze ungalimali.
Susa isithombe sangemuva ngesinyathelo
Yize ephuzwini elidlule ngikutshela ukuthi ungasikhipha kanjani isithombe sangemuva, ngezansi ngifuna ukukhuluma nawe ngesinyathelo ngesinyathelo ukuze ukwazi ukusisusa ngaphandle kwezinkinga nangaphandle kokuba umsebenzi ube yinkimbinkimbi kakhulu. Ngalesi sinyathelo ngesinyathelo uzodinga:
Umshini wokuwasha izesheli
Izindwangu ezindala phansi
I-Solvent ukususa iphepha lodonga
Ithuluzi lokusula iphepha lodonga
Isinyathelo ngesinyathelo ukususa iphepha lodonga
Beka izindwangu ezindala phansi ukuze yonke into oyikhipha odongeni iwe. Susa amapuleti okushintsha nezitolo zikagesi ezindongeni. Sika amandla egumbi lapho uzosusa khona isithombe sangemuva.
Sebenzisa ipensela ukwakha izimbobo ezincane ephepheni lodonga ukuze isixazululo singene kalula ngengxenye yokunamathela.
Kukhona izixazululo ezilungiselelwe ukuthengisa zokususa iphepha lodonga, kepha futhi ungasebenzisa amanzi ashisayo kuphela okususa iphepha lodonga. Faka isixazululo ebhodleleni lokufafaza. Amanzi adinga ukushisa ngakho-ke kuhle ukuthi uxube isixazululo ngamanani amancane.
Sebenzisa ibhodlela lokufafaza ukucwilisa udonga futhi ukwazi ukususa iphephadonga kalula, kepha kuzodingeka uvumele amanzi abesodongeni cishe imizuzu eyi-15 ngaphambi kokukhipha iphepha lodonga.
Bamba isithombe sangemuva kusuka ekhoneni elingezansi bese uphakamisa. Sebenzisa ummese obanzi we-putty ukwenza ukukhipha iphepha kube lula. Phinda izinyathelo ezingenhla uze ususe lonke iphepha.
Ebhakedeni hlanganisa isipuni sesipuni sesitsha ngamanzi ashisayo futhi ngesiponji hlanza kahle izindonga ukuze ususe yonke iminonjana yokunamathela kusithombe sangemuva. Okokugcina, hlambulula izindonga ngamanzi ahlanzekile bese uwomisa ngethawula.
Susa iphepha lodonga ngaphandle kwamanzi
Uma ungafuni ukusebenzisa amanzi ukususa iphepha lodonga, ungaphuthelwa ngale ndlela ukuwasusa ngenjini yesitimu. Ngenxa yabashayeli besiteshi sika-Carol sika-YouTube nabazala bethu singabona lesi sinyathelo esikhulu ngaphandle kwezinkinga eziningi. Ungaphuthelwa!
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Hlobisa » Susa isithombe sangemuva
Kaffeine iphepha lokunamathisela odongeni kusho
Okuthunyelwe okuhle! Yize ngithanda ukuveza ukuthi lokhu kuyiqiniso kumaphephadonga amaningi, kukhona uhlobo olulodwa lwezinto ezingadingi umsebenzi omningi. Ibizwa ngephepha lezicubu elingasuki noma elingalukiwe. Inokucaciswa okulula kakhulu ukukufaka ngoba kufanele unamathisele udonga kuphela, hhayi iphepha, futhi kulula kakhulu ukulisusa. Kulula njengokuphakamisa ikona bese ukhipha. Awekho amanzi, akukho scrapers, akukho mishini, esheshayo futhi elula.
Phendula isithombe sangemuva se-Kaffeine
Massimo bassi kusho
Siyakuhalalisela ngendatshana. Izithombe ezinhle.
Phendula uMassimo Bassi